Falling Walls Lab Myanmar is now calling applications for 2022! – Impact Hub Yangon
၂၀၂၂ ခုနစ်အတွက် Falling Walls Lab Myanmar 2022 မှလျှောက်လွှာများ စတင်ခေါ်ယူနေပါပြီ။
Falling Walls Lab သည် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်သူများနှင့် ပညာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ထူးချွန်သောကျောင်းသားများမှ ၄င်းတို့ရဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုရှိပြီး ခိုင်မာသော အတွေးအခေါ်များ၊ သုတေသန စီမံကိန်းများနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို ဂျာမဏီနိုင်ငံ၏ မြီု့တော် ဘာလင်မြို့တွင် တင်ပြန်ိုင်မည့် နေရာတစ်ခုအဖြစ် ၂၀၁၆ ခုနစ်မှ စတင်၍ နှစ်စဉ်အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိပါသည်။
Impact Hub Yangon သည် ထပ်မံ၍ မိတ်ဖက်အနေဖြင့် ၂၀၂၂ ခုနစ်အတွက် Falling Walls Lab Myanmar တွင် Scholar Institute, Strategy First University နှင့် SME HUB Myanmar တို့နှင့်အတူတကွ ပါဝင်ထားပါသည်။
Falling Walls Lab Myanmar မှ ဘယ်လိုလူမျိုးများကို ရှာဖွေနေတာလဲ?
စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်သူများ၊ သုတေသီများနှင့် ပညာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ထူးချွန်သောကျောင်းသားများ
ခိုင်မာပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိတဲ့ အတွေးအခေါ်များ၊ သုတေသန စီမံကိန်းများနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတစ်ခုခုကို အကောင်အထည်ဖော်သူများ
ထိုခိုင်မာပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိတဲ့ အတွေးအခေါ်များ၊ သုတေသန စီမံကိန်းများနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို (၃) မိနစ်အတွင်းမှာ တင်ပြနိုင်သူများကို ရှာဖွေလျက်ရှိပါသည်။
Falling Walls Lab Myanmar မှ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးများ ရမလဲ?
အခြားသော ဆန်းသစ်တီထွင်သူများ၊ ပညာရပ်အသီးသီးမှ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ဆွေးနွေးမှုများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများတွင် ပါဝင်နိုင်မည့်အခွင့်အရေး
မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုတစ်ယောက်အဖြစ် ဘာလင်မြို့၊ ဂျာမဏီနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်မဲ့ Global Lab မှာပါဝင်နိုင်မည့်အခွင့်အရေး စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ငယ်ရွယ်တဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင်သူ၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူ (သို့မဟုတ်) သုတေသီတစ်ဦးဦးဖြစ်ပြီး ခိုင်မာသော အတွေးအခေါ်များ၊ သုတေသန စီမံကိန်းများနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို (၃) မိနစ်အတွင်းမှာ တင်ပြနိုင်သူဖြစ်ပါက Falling Walls Lab Myanmar 2022 မှာ ပါဝင်လျှောက်ထားရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
Falling Walls Lab Myanmar 2022 ကိုဇူလိုင်လ (၂၄) ရက်နေ့ ၂၀၂၂ မတိုင်ခင် ပါဝင်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
Falling Walls Lab အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် လျှောက်လွှာတင်ရန်အတွက် http://falling-walls.com/lab/apply သို့ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Falling Walls Lab Myanmar 2022 is now open for applications!
The Falling Walls Lab isaplatform where entrepreneurs, innovators and academics from interdisciplinary fields are given an opportunity to showcase their strong and innovative ideas, research projects and social initiatives at Berlin, Germany.
Impact Hub Yangon is participating again asapartner this year in Falling Walls Lab Myanmar 2022 together with Scholar Institute, Strategy First University and SME HUB Myanmar.
Who are Falling Walls Lab Myanmar looking for?
Entrepreneurs, Innovators, Researchers and Academics from interdisciplinary fields
Haveastrong and innovative idea, research project or social initiative
Can present his/her work in3minutes
What can you expect from Falling Walls Lab Myanmar?
An opportunity to get involved in exciting discussions and network with fellow innovators and experts from different disciplines.
An opportunity to beaMyanmar representative to participate in Global Lab at Berlin, Germany.
If you areayoung innovator, entrepreneur or researcher who haveastrong idea, research or intiative to present in (3) mins, you are welcomed to apply Falling Walls Lab Myanmar 2022.
Please apply before 24 July 2022.
For more information and apply, please go to http://falling-walls.com/lab/apply
Previous Deadline Extended to 5th June 2022 (Sunday)
Next Call for Applications: Preparation Program for Exportation and European Market Readiness